၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ၂၀ရက်နေ့တွင် ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးများ ရောင်းဝယ်ရာတွင် လော့ဆိုဒ်ပမာဏအပြောင်းအလဲအသစ်များကို FBSမှ သတ်မှတ်လိုက်ရပါသည်. DASH, Ethereum, နှင့် Litcoinတို့အတွက် စည်းကမ်းအသစ်များသတ်မှတ်သွားမည်ဖြစ်သည်.
• DASH: ၁လော့အစား ၁၀
• Ethereum: ၁လော့အစား ၁၀
• LiteCoin: ၁လော့အစား ၁၀၀
ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးများတွင် တန်ဖိုးအတက်အကျအလွန်ကြမ်းသဖြင့် ရောင်းဝယ်ရာတွင် လော့ဆိုဒ်ပမာဏအပြောင်းအလဲအသစ်များ သတ်မှတ်လိုက်ရပါသည်. လော့ဆိုဒ်သတ်မှတ်ချက်အသစ်ဖြင့်ရောင်းဝယ်ကာ သင့်အမြတ်ငွေကို ၁၀ဆ သို့ အဆ ၁၀၀အထိ မြှင့်တင်လိုက်ပါ.
ယခုသတ်မှတ်ချက် စည်းကမ်းချက်အသစ်များမှာ ဒီဇင်ဘာ၂၀ရက်နောက်ပိုင်းဖွင့်သော အော်ဒါအသစ်များအတွက်သာ သက်ေ၇ာက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်. ယခင်ဒီဇင်ဘာ ၂၀ရက်မတိုင်မီဖွင့်ထားသော အော်ဒါအဟောင်းများအတွက်မှာမူ ယခုသတ်မှတ်ချက်တွင် အကျုံးဝင်မှုမရှိပါ.
ထိုအမျိုးအစားများအတွက် မူလသတ်မှတ်ထားသော ကော်မရှင် ပမာဏမှာမူ မပြောင်းလဲပါ. FBSနှင့်အတူ ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးများ ရောင်းဝယ်ကာ အမြတ်ငွေရယူလိုက်ပါ!